Predictive Analytics - Maitiro Nemashandisirwo Ayo - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Big data, Kufanotaura Ongororo
Izwi rekufungidzira nderekufungidzira kana kutarisira zviitiko zvichauya mune ramangwana. Kufanotaura analytics iko kushandiswa kwedata ongororo, manhamba ekuenzanisira, uye machine learning tekinoroji yekufanofungidzira zvingangoitika. Inosanganisira akasiyana siyana masisitimu ehunyanzvi uye matekinoroji. Idzi mbiri mbiri mhando dzekufungidzira analytics mhando ndeyekuenzanisa mamodheru. Ivo vanobatsira kufanotaura zvabuda senge kana chinhu chakatadza. Iwo ekumisikidza mamodheru ayo anobatsira kufanotaura nhamba, senge yepakati nguva pamberi pekuputsika. Kufanotaura analytics kuwedzera kushandiswa nemasangano akasiyana muzvikamu zvakawanda, senge kugadzira, zvekutengesa, zvemari, nezvimwe. AI-powered analytics chikuva nezvakazara chokufenbera analytics kugona. Inopa scalable analytics uye kuona data chikuva chinoita kuti mabhizinesi agadzire, atore, uye agadzirise akachengetedzeka, ekudyidzana webhu kunyorera, mishumo, uye madhibhodhi anodyiswa neakawanda data masosi.
Kufanotaura Analytics urongwa
Mhinduro yacho inopa vashandisi vane 360-degree maonero ebhizinesi ravo, inoongorora mabhiriyoni ezvinyorwa mumasekondi uye chokufenbera analytics hunyanzvi hwese mune yekukweva-uye-kudonha ruzivo, pasina multiplex dhata modelling kana kukodha kunodiwa.
Maitiro acho Anobatanidzwa muPredictive Analytics
1. Tsanangudzo yeProjekti: Nhanho yekutanga ndeyekuziva mhedzisiro yeprojekti, izvo zvinofambiswa, zvinangwa zvebhizinesi, uye zvichibva pane kuchaunganidzwa kwedata.
2. Kuunganidzwa kweData: Nhanho inotevera ndeyekuunganidza data kubva kune akawanda masosi, Kuti uve nemufananidzo weakasiyana kudyidzana kwevatengi sechinhu chimwe chekuona chinhu.
Kuongorora: Kupfuurirazve, iyo data inoongororwa, kucheneswa, kushandurwa, uye kuteedzerwa kuti ione kana ichipa ruzivo rwakakosha uye kunobatsira kupedzisa.
4. Statistics: Izvi zvinogonesa kusimbisa kana zvakawanikwa, fungidziro, uye fungidziro zvinoyemurika kuenda kumberi uye kuvaedza vachishandisa nhamba yehuwandu.
5. Kuenzanisira: Izvo zvinobatsira mukugadzira isina kukanganisa-isina fungidziro yemhando nezveramangwana iyo inopa sarudzo dzekusarudza yakanakisa sarudzo iyo inogona kugadziriswa kuburikidza nemazhinji-modhi ongororo.
6. Kutumirwa Predictive model deployment inopa sarudzo yekugadzira uye kutumira iyo analytics zvinoguma nekuita zvisarudzo zvine pundutso. Inobatsirawo kuburitsa mhedzisiro, mishumo, uye mamwe metrics.
7. Kuongorora: Models dzakagadzirirwa dzinozoteedzerwa kudzora uye kutarisa mashandiro ekuita kuti ive nechokwadi chekuti mhedzisiro inodiwa inowanikwa sekutarisirwa.
Zvishandiso zvePredictive Analytics
1. CRM: Kufanotaura analytics inobatsira kuzadzisa zvinangwa zvakasiyana. Mishandirapamwe yekushambadzira, kutengesa, uye masevhisi evatengi, Etc. Kufanotaura analytics inogona kushandiswa mukuongorora hukama hwevatengi. Muhupenyu hwese hwemutengi kutenderera kubva pakutora, kukura kwehukama, kuchengetedza. Mutengi kuhwina-kumashure kunogona kurongwa zvirinani uye kutariswa zvine hungwaru kuchengetedza vatengi uye kuvanyora zvakajeka.
2. Nezveutano: Kushandiswa kwe chokufenbera analytics inogona kubatsira kudzivirira nyaya uye njodzi dzeavo vari kukura zvimwe utano-zvinetso zvine hukama senge asthma, gomarara, uye zvimwe zvirwere zvinotyisidzira hupenyu.
3. Kuunganidza Analytics: Aya mafomu anovandudza kugoverwa kwe zviwanikwa zvekuunganidza nekutsvaga maunganidzwa ekuunganidza, nzira dzekubata kuti usvike kwavari, zviito zvepamutemo zvekuwedzera kupora, uye kudzikisira mutengo kwekuunganidza.
4. Kubiridzira Kuziva: Kufanotaura Analytics inogona kubatsira mune zvinotevera. Spot zvikumbiro zvechikwereti zvisirizvo, kutengeserana kwakatsauka kunotungamira kune hutsotsi zvese pamhepo nepamhepo. Identity kuba uye inishuwarenzi yenhema inoti kuchengetedza mari neinishuwarenzi masangano akawanda chibatiso matambudziko uye kukanganisa kumabasa avo.
5. Risk Management: Kufembera kuongororwa kunobatsira kukwirisa madzoro pamari yakasimwa, probabilistic njodzi yekuongorora kuti ikwanise kuburitsa fungidziro chaiyo ndemamwe mabhenefiti akakosha ekushandisa. chokufenbera analytics.
Predictive Analytics uye hukama hwayo neMachina Kudzidza
Aug 6 | Machine Learning, Kufanotaura Ongororo
Predictive analytics, muchina kudzidza - mahukama uye kusiyana kwavo